Ulawula njani utshintsho olwenziwe kwimephu- Geofumadas
Ikhaya/cadastre/Indlela yokulawula iinguqu ezenziwe kwimephu
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni ufuna ukulawula ukutshintshwa kweemephu okanye iifayile ze vector.
1. Ukwazi iinkqubo ezithe zadlula kwimephu emva kophando, oku kubizwa ngokuba kukugcinwa kwecadastral.
2. Ukwazi utshintsho olwenziwe ngabasebenzisi abahlukeneyo kwifayile, kwimeko enokuthi isetyenziswe ngabasebenzisi abaninzi.
3. Ukucima utshintsho olwenziwe ngempazamo emva kokuvala inkqubo.
Nokuba iyafuneka, inyani kukuba iyimfuneko kakhulu. Masibone ukuba ungayenza njani nge Microstation.
1. Ukuqalisa umyalelo wembali
Lo msebenzi ubizwa ngokuba "yolondolozo lwembali” kwaye yenziwe “kwiZixhobo / imbali yoYilo”. Ukufaka umyalelo wombhalo kwi-Microstation, iphaneli yomyalelo inikwe "izixhobo / i-keyin" kwaye kulo mzekelo, "umboniso wembali" ufakwe, uze ungene.
Le yiphaneli yezixhobo eziphambili zogcino, i icon yokuqala kukugcina utshintsho, elandelayo ukubuyisela utshintsho lwangaphambili, eyesithathu ukujonga utshintsho kwaye eyokugqibela kukuqalisa ugcino okokuqala. Utshintsho oluvela kuyo nayiphi na iseshoni lunokubuyiselwa, kungakhathaliseki ukuba myalelo, lumka, utshintsho alugcinwanga ngokuthanda, kodwa xa umsebenzisi evula iqhosha elithi "comit", kwakhona ukuba umsebenzisi uthatha imephu ukuba omnye umsebenzisi akagcinanga utshintsho kuyo. Inkqubo ilumkisa ukuba umsebenzisi akenzanga "comit".
2. Ukuqala ifayile yesiganeko
Ukuqala ifayile yesiganeko, iqhosha lokugqibela lisebenza.
3. Ukujonga iinguqulelo
Ngoku siyayibona ifayile yembali ngasekunene, eluhlaza okongezwa iivenkile, ngombala obomvu ezisusiweyo kunye nezohlaza okwesibhakabhaka ezo bezilungisiwe kuphela. Utshintsho olukhethiweyo luboniswa ngemibala eyahlukeneyo, amaqhosha akuvumela ukuba ukhethe ukuba ufuna kuphela ukubona iintlobo ezithile zotshintsho, ezinje ngezicinyiweyo umzekelo.
Kwimeko yam ndiyisebenzise kwezinye iiprojekthi ukulawula ukugcinwa kwe-cadastral. Iinkqubo ezininzi ze-cadastre, emva kwemiboniso yoluntu, zibhengeza ngokusesikweni imephu kwaye kungoku ngeli xesha ugcino lwembali luvulwa, ngaloo ndlela unokubona ukuba ipropathi yayinjani, yahlulwa njani okanye yaguqulwa kwaye ngaphezulu kwako konke onokukwenza Ulawulo lweenguqu kuba inkqubo ngokuzenzekelayo yongeza umsebenzisi kulondolozo, umhla kunye nenkcazo yenguqu inokubhalwa, njengokuthengiselana kokugcina okanye iinkcukacha ezibalulekileyo.
Kulo mzekelo, ipropathi yokuqala yayiyi-363, ke ibonakala ibomvu kuba yayicinyiwe, emva koko kwahlaza okwesibhakabhaka amanani owafumeneyo avele kwaye eluhlaza ubona umgca apho ipropathi yahlulwe khona ipropathi. Yintoni engwevu ayifumananga lutshintsho. Amanani aluhlaza kufuneka abe luhlaza okwesibhakabhaka, kodwa kusenokwenzeka ukuba asuswe apho ayedalwe khona ekuqaleni.
4. Uyicima njani ifayile yogcino
Ewe, loo nto ayinakho kwaye ayenzi ngqiqweni kakhulu kuba indawo yogcino, kuba inembali yayo, ayinkulu. Kodwa ukuba ufuna ukucima ifayile yembali, ungayenza njani ukuvula imephu entsha, fowunela enye eneembekiselo zembali kwaye wenze ikopi / uncamathisele ifayile yethu nokuba kungocingo / ikopi okanye ikopi / inqaku Imvelaphi / indawo yokufika kwindawo enye.
ASCII ubugcisa bufika kwiGoogle Maps